आमाको यो कर्तुत पछि, छोरीले सधैका लागि यो संसारबाट बिदा लीइन ! – Jagaran Nepal
आमाको यो कर्तुत पछि, छोरीले सधैका लागि यो संसारबाट बिदा लीइन !
काठमाडौं। एउटी आमाले आफ्नी छोरीको बिहे आफ्ना प्रेमीसँग गराइदिइन् । छोरीको बिहे गराइसकेपछि पनि उनले ती प्रेमीसँग आफूले पनि अवैध सम्बन्ध जारी राखिन् । यो सबै सहन नसकेपछि छोरीले देहत्याग गरिन् । अहिले मृ-तककी बहिनीले आफ्नी आमाविरुद्ध दिदीलाई देहत्याग गर्न बाध्य पारेको अभियोगमा उजुरी दिएकी छिन् ।
आज तकका अनुसार घटना हैदराबादको हो । १७ वर्षकी छोरीले दिएको उजुरी अनुसार उनकी आमा १ वर्षदेखि पितासँग छुट्टिएर बसेकी थिइन् । यही समयमा उनकी आमा अनिताको पेरम नवीन कुमार नामका एक व्यक्तिसँग अ-वैध सम्बन्ध थियो । छोरीका अनुसार ती युवक प्रायः उनको घर आइरहन्थे । नवीनसँगको आफ्नो अ-वैध सम्बन्ध अगाडि बढाउनको लागि अनिताले आफ्नी जेठी छोरीको बिहे नवीनसँग गराइदिइन् ।
केही समयपछि छोरीले यो सब सहन सकिनन् र उनले देहत्याग गरिन् । छोरीका अनुसार उनकी मृ-तक दिदी हैदराबादको एक कलेजमा पढ्थिन् । गत वर्ष डिसेम्बरमा उनले आफ्नी आमा र आफ्ना पति नवीनको बीचमा अ-वैध सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि उनले पतिको घर छोड्ने ध-म्की दिएकी थिइन् । बिहेपछि पनि आमा र नवीनको अ-वैध सम्बन्ध पहिलेजस्तै जारी थियो जसका कारण मृ-तक युवती निकै त-नावमा थिइन् ।
अ-वैध स-म्बन्ध जारी रहेपछि उनले आमा र पतिलाई यो सब बन्द नगरे देहत्याग गर्ने ध-म्की दिएकी थिइन् । तर, उनको ध-म्कीपछि पनि उनीहरुको अ-वैध स-म्बन्ध जारी रहेपछि उनले दिक्क भएर साँच्चिकै देहत्याग गरिन् । मृ-तककी बहिनीले मिरापेट पुलिस स्टेशनमा उजुरी दिएकी हुन् । पुलिसले उजुरी दर्ता गरेर कारवाही अगाडि बढाएको छ ।
यो पनि : क पत्रकार जसको दर्शकले टिभीमा हेरेर ज्यान बचाए
भिक्टोरियाले ट्वीटसँगै आफ्नो फोटो पनि शेयर गरेकी छिन् । जसमा एक फलोअरले त्यसमा कुनै गाँठो नदेखिएको बताएका छन् । जसमा भिक्टोरियाले प्रष्ट पार्दै लेखेकी छिन्, ‘म सहमत छु, यो यति सजिलै देखिँदैन । त्यसलाई ध्यान दिएर नहेरेसम्म देख्न सकिँदैन । डाक्टरहरुले यो ट्युमर मेरो थायराइडको बीचमा रहेको छ र यसले मेरो ग्ल्यान्डसलाई अगाडि र माथि धकेली रहेको छ । जसले गर्दा यो अलि बाहिर निस्करहेको देख्न सकिन्छ ।’ भिक्टोरियाले इन्सटाग्राममा पोष्ट गर्दै ती दर्शकलाई धन्यवाद दिएकी छन् ।